Jose Mourinho oo shan laacib keeni karo Old Trafford halka shan kale uu ceerin doono.
Thursday, September 20th, 2018 - 16:28:51
Monday May 23, 2016 - 09:21:01 in Wararka by Ak Caqil
Manchester United oo maalmahan ku dhawaaqi doonta in Jose Mourinho uu yahay macalinkeeda cusub ayaa la so sheegayaa in macalin Mourinho uu durbo bilooway laacibiinta uu doonaayo inuu dalbadaa.
Tababre Jose Mourinho ayaa biloowi doono inuu Kooxda Manchester United u soo iibiyaa 5 laacib halka uu Kooxda ka diri doono 5 Laacib asiga oo inta badan laacibiintiisa heeysan doono.
Wargeesyada ka soo baxaa ingiriiska ayaa qoraayo in Man United ay markale qarash gareeyn doonto lacago badan kuwaas oo Kooxda ay ku soo iibsan doonto mar kale laaciibiin. Ugu yaraan shan ciyaariyahan halka shan kale ay ka tagi doonaan Old Trafford, waxaana lagu sheegay shanta xidig ee uu keen san doono macalinkaan.
1: John Stones, Jose ayaa si weyn ula dhacsan xidigaan da’da yar ee kooxda Everton iyo England asiga oo baadi goob xoogan u galay sanadkii tagay wuxuuna isku dayay inuu keeno Stamford Bridge balse waxaa uu waji gabx kala kulmay kooxda Everton balse taas badalkeeda Jose ayaa abaal badan uga heeyn doono in loo soo diiday Stones waase haduu haataan helaa maadama uu Koox cusub qabtay iskuna dayi doono inuu keensado kooxdiisa cusub ee United.
2: James Rodriguez waa mid kamid ah liiska Jose, sida ay soo tabineeyso majalada Daily Mirror James ayaa doonaayo laftiisa u wareegida United waxaana ay Real Madrid dooneysaa inay iska iibiso maadama uu macalin Zidane u arko James inuusan anfaci karin shaxdiisa.
3: Marquinhos ayuu Jose doonayaa laacibka daafaca PSG iyo Brazil ayuu Jose u doonayo inuu ku xoojiyo daaficiisa waxaana u arkaa mid ka mid kuwa ugu muhiimsan saxiixyadiisa.
4: Pierre-Emerick Aubameyang waxaa uu liiskaan kaga jiraa meel dheer maadama Jose balamihii uu qaaday ay ku jirtay in Marcus Rashford, Lingard, Fosu-Mensah iyo Ashley Fletcher uu siin doono waqti ay Kooxda koowaad ugu ciyaaraan sida la fahamsan yahay uu 5: Zlatan Ibrahimovic oo si xor ah u imaaan doono sidaas darteed waa yar tahay fursada uu Pierre-Emerick Aubameyang uu ku imaan karo Old Trafford.
Shanta laacib ee baxeeyso ayaa kala ah. Mata, Marcos Rojo, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay iyo Adnan Januzaj.
1: Juan Mata Kooxda Chelsea ayuu hore kaga soo ceeriye Mata iyo Jose ma ahan cadaw uma dhaxeeyso wax xumaan ah balse Jose ayaa doonaayo in laacib walbo oo Kooxda ah uu ku dagaalamaa kubada.
2: Marcos Rojo Jose ayaa u arko mid uusa isticmaali karin isla markaas waxaa uu doonaayaa inuu Kooxda u siiyaa fursad laacibiinta da'ada yar ee Cameron Jackson Borthwich iyo Luke Shaw oo dhaawac ka soo laaban doono.
Morgan Schneiderlin dabcan waa laacib heer sare ah laakiin wali uma muuqdo inuu yahay heerkii United loogu tala galay sida ay qabaan in badan saxaafada iyo laacibiintii hore ee United sidaas oo kale Jose ayaa aaminsan in Morgan Schneiderlin uu is muujiyaa ciyaaraha xagaaga kadib haduu ka faa'iideeysan waayaa uu iibin doono ka hor September.
4: Memphis Depay laacib heer sare ah inuu yahay farsamo ahaan cid isku heeysataa ma jirto balse uusan la qabsan United waxaana uu soo bandhigay wax ka liitaa waxii laga sugaaye. Laacibkaan da'ada yar ayaa Kooxda PSV kula guuleeystay horyaalka iyo Gooldhalinta Dutchka balse aan xitaa u soo bandhigin United waxii laga rabay barkeed taas oo shaki badan ka dhalisay Kooxda Memphis ayaa la soo sheegayaa inuu albaabka ka bixi doono maadama la yiri waa uu dhaqan xun yahay.
5: Januzaj Adnan: waxaa uu la yimid mucjiso markii Kooxda koowaad loo soo dalac siiye bishii September 2013kii asiga oo xilli ciyaareed yaab leh ku qaatay EPL wallow ay Kooxdii Moyes dhibaatooneeysay waxaa uu wiilkaa yar ee reer Belgium ka mid ahaa laacibiintii ugu muhiimsaneed Kooxda Moyes. Balse nasiib xumo ma uusan helin waqti ku filan intuu joogay Louis van Gaal Kooxda sidaas darteed Jose ayaa aaminsan fakarka ah wax raaxo ama bax taas oo Adnan si la mid ah Mata iyo Memphis ka bixineeyso iridka.
Dhinaca kale waxaa laga yaabaa in Jose uu iska diraa Bastian Schweinsteiger oo dhaawac uu daashaday wallow ay asxaab yihiin balse wali lama ogo waxaa uu ka yeeli doono Halyeeyga reer Germany macalinka Cusub.
W/D AK Caqil.